Miaraka amin'ny sosialy eo ambanin'ny barila ny marika nataon'ny mpanamboatra - Rano sampana betsaka, azafady! | Martech Zone
Miaraka amin'ny sosialy eo ambanin'ny barila ny marika nataon'ny mpanamboatra - Rano sampana betsaka, azafady!
Alakamisy Febroary 21, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Marty Thompson
Vao haingana aho no namaky ilay lahatsoratra tamin'ny Fiangonan'ny mpanjifa, nosoratan'i Jackie Huba sy Ben McConnell (olona roa hendry indrindra amin'ity orinasa ity), momba ny hoopla any Marker an'ny mpanamboatra. Maker's Mark dia marika iray eo ambanin'ny elo an'ny Fianakaviana vokatra.
Na ilay namantsika tany Raidious, Dodge Lile aza, dia nibolisatra tamin'ny fandinihana tamim-pitandremana. Toa nanapa-kevitra ny hametaka ny vokatr'izy ireo ny Marka an'ny mpamorona mba hanitarana ny lisitra mitohy, ary amin'izany hamaly ny fangatahana. Ny valiny izay niaretan'ny marika Maker's Mark tamin'ny fizarana ity fanapaha-kevitra ity tamin'ny alàlan'ny tranokalan'izy ireo, ary ny fantsom-piarahamonina dia tsara, mamela fotsiny hilaza fa hisotro bourbon bebe kokoa aho tato ho ato raha izaho Rob na Bill Samuels.
Amin'ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra novakiako, ny Marka sosialy nataon'ny Maker's Mark ankehitriny dia aseho ho mpamonjy, ho mpanitsy lalana marina, na fantsona hifehezana ny fanapahan-kevitra ratsy tsy nampoizina. Fa manana fanamarihana sy fanamarihana ary tolo-kevitra fanampiny roa aho. Ny Maker's Marka dia tena tonga saina fa misy marika, ary avy eo misy marika.
Betsaka ny vokatra ao anatin'ny portfolio -n'ny vokatra ao Beam no azo antoka fa tsy hojerena toy izany. Fa ahoana kosa i Laphroaig? Ardmore? Courvoisier? Ireo rehetra ireo koa dia marika Beam. Tsy afaka mieritreritra fanapahan-kevitra mirehitra sy tsotra kokoa aho noho ny mikorontana amin'ny vokatra efa nahazatra ny fotoana. Fa andraso, ny tsena mahafantatra ny fanovana ireo vokatra ireo nandritra ny taona maro? Nisy fanovana ve tsy nampandre ny mpanjifa? Tsy dia inoako loatra izany.
Ny tiako holazaina dia izao. Raha vantany vao manana marika ianao, vokatra iray, izay azonao amin'ny maha-mpamatsy anao fa saika masina izy, manao fanovana lehibe ve ianao amin'izany, nefa tsy misy fifampiraharahana sy hevitra avy amin'ny mpanjifa? Ny ankamaroan'ny vokatra goavambe dia hanana mpanaraka mahatoky aorian'ny fotoana lava taorian'ny nifindran'ny mpitantana ny varotra sy ny tafiky ny tantely mpiasa ho an'ny marika vaovao, ho an'ireo orinasa vaovao. Eto no marobe marika tsy mahomby amin'ny fomba fanatonany amin'ny fampiasana haino aman-jery sosialy.
Mijery ny media sosialy izy ireo fantsona hafa ihany, tsy misy fananganana vondron'olona mpiaro ny marika efa niasa hiasa akaiky amin'ny marika. Tsy afaka manao izany amin'ny alàlan'ny Twitter sy Facebook fotsiny ianao, ary manangana fifandraisana maharitra sy mahasoa. Azo antoka fa ireo sehatra sosialy ireo dia azo ampiasaina ho fantsom-pifandraisana ho an'ny fiarahamonina, saingy zava-dehibe ny fananganana vavahady mafy orina, vondrona ifantohana virtoaly raha sitrakao ary hampiasa izany ho toeram-pifandraisana. Mitovy amin'ny famindram-bahoaka ve izany? Lavitra izany. Ny marikao dia tsy mahalala firy hoe iza no ao amin'ny vahoaka, ary inona ny lokon'izy ireo.
Ny olana Bourbon dia manondro ihany koa ny iray amin'ireo zava-misy marina amin'ny marketing amin'ny taonjato faha-21. Ny marketing dia tsy misy ao anaty banga, nesorina tamin'ny efitranon'ny fitantanana vokatra, ny fanohanan'ny mpanjifa ary ny ekipa mpanatanteraka. Izy io dia tsy maintsy ampifandraisina akaiky amin'ny fanapahan-kevitra lehibe izay misy fiatraikany amin'ny marika, na aiza na aiza no ifandraisan'ny marika amin'ny mpanjifa. Io no tena fampanantenan'ny fomba sosialy azo ampiasaina sy tokony hampiasaina, satria ny sakana izay nisy teo aloha dia tsy dia misy dikany intsony. Na izany aza, tsy tokony hijerena ny zava-drehetra ara-tsosialy ho mpamily ao ambadik'ity ezaka ity isika. Ary ny manao zavatra hafa dia ny fanehoan-kevitra be eo amin'ny sehatry ny tontolo sosialy. Noterena an-jorony ara-bakiteny i Mark's Maker, ary nametraka ny ekipa mpivarotra Beam amin'ny toerana iray izay toa mifanohitra amin'ny kaody marketing.
Ny dokam-barotra sy ny varotra dia tsy maintsy: “Asehoy fotsiny ny fampahalalana marina momba ny tanjaky ny alikaola fa tsy manasongadina ny tanjaky ny alikaola ho toetran'ny marika tsara.” Fehezan-dalàna momba ny varotra.
Na Marka an'ny mpamorona ianao, na marika rehetra, makà fotoana, ary miezaha hanao asa mafy any ambadiky ny sehatra, alohan'ny hiantehanao amin'ny sehatry ny fiarahamonina hamaha ny olanao rehetra. Ary misotroa andraikitra.
Tags: hazomarketing amin'ny bontolomarikamarikafiaraha-moninajim beammpanamboatra marikahaino aman-jery sosialy
Ny ady ho an'ny vanim-potoana fialantsasatra Glory - Google Shopping vs. Amazon Product Ads in Q4
22 Feb 2013 tamin'ny 2:41 maraina
Azoko ny antony naniry hanao ny fanovana, saingy fanapahan-kevitra ratsy hatrany am-boalohany izany. Rehefa nandre izany tamin'ny vaovao aho dia nihomehy tamin'ny vadiko ary niteny hoe “Eny, tsy hahomby izany.” ary jereo.. tsy izany.
22 Feb 2013 tamin'ny 10:59 maraina